🥇 ▷ Samsung Galaxy Note 10 Plus ayaa dabada ka riixaya kuwii hore ee shaqada ka fadhiyey carshiga ✅
Samsung Galaxy Note 10 Plus ayaa dabada ka riixaya kuwii hore ee shaqada ka fadhiyey carshiga
Nooc 5G ah oo ah nooca loo yaqaan ‘Galaxy Note 10 Plus’ ee Samsung ayaa ah orodka hore ee ugu horreeya ee darajadda kamaradaha DxOMark. Markaa taas, Huawei P30 Pro hadda waa inay degaan booska labaad. Sidoo kale darajada qiimeynta ‘selfie’, calanka cusub ee Samsung ayaa hadda soo galay meesha ugu sareysa.
Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G: Kaameradda casriga ah ee ugu fiican – ayaa yidhi DxOMark
Wali lama heli karo, laakiin mar horeba waa dusha sare ee darajada darajada kamaradaha DxOMark: Galaxy Note 10 Plus oo Samsung ka ah noocyada 5G ee kala duwanaanta. Tijaabadlayaashu waxay si aad ah ugu qanciyeen awooda sawirka iyo fiidiyowga telefishanka casriga ah ee cusub waxayna xitaa ku abaal mariyeen rikoor cusub dhamaadka. Iyadoo leh 113 dhibcood, taasi waxay leedahay Galaxy Note 10 oo lagu daray 5G wax yar ka hor inta Huawei P30 Pro uu meel marin, kaasoo hadda ay tahay inuu ku qanco 112-da dhibcood ee ku jirta booska labaad – oo ay ku jiraan taleefan kale oo Samsung ah, Galaxy S10 5G.
“Thanks to horumarka qalabka sida – sida chipset cusub iyo fiilo weyn oo kamaradaha telephoto ah, algorithms-ka hagaajiyay iyo qurxinta ganaaxa – oo leh Galaxy Note 10 Plus 5G ayaa sii xoojinaya waxqabadka wanaagsan ee aaladaha sare ee Samsung, taas oo ka dhigaysa hogaaminta aaladda tayada tayada muuqaalka ee xogteena, “ayuu ku soo gabagabeeyey tijaabiyayaasha.
Gaar ahaan, sanqadha muuqaalka adag ee jira, midabada soo jiidashada leh iyo ilaalinta faahfaahinta badan inta lagu jiro soo dhaweynta ayaa ka dhaadhiciyay tijaabiyayaasha. Waxaa jira dhimisyo yaryar – haddii ay jiraan – kaliya qasaaro kooban oo faahfaahin ah iyo dhibaatooyinka qaarkood ee la raaco marka la isticmaalayo habka bokeh.
Waxaan u maleynaa nooca caadiga ah ee Samsung Galaxy Note 10 (oo lagu daray) qaban, waxaan halkan ku soo koobnay fiidiyaha:
Dabcan, GIGA sidoo kale waxay lahaan doontaa awoodaha kamaradaha ee Galaxy Note Ka taxadar 10 10 5 5 isla marka aan helno qalab tijaabo oo u dhigma oo la heli karo. Ugu dambayn markaa waanu fahmi karnaa bal in booska koowaad ee darajada uu runtii xaq yahay iyo in kale.
Samsung Galaxy Note 10 5G: Taleefoonnada gacanta ee ugu horreeya oo leh wax kabadan 100 dhibcood oo fiidiyoow ah
Sida laga soo xigtay DxOMark Samsung ayaa sidoo kale laga yaabaa inay gadaal ka garaacdo waxqabadka fiidiyowga. Darajada ugu sareysa ee leh Galaxy Note 10 Plus 5G waa taleefankii ugu horreeyay ee abid helo 100 dhibcood. Markii hore aaggan wuxuu ahaa Galaxy S10 5G meesha ugu horeysa, mar labaadna waxaa si dhow ula socday Huawei P30 Pro.
Samsung waxay ku isticmaashaa Galaxy Note 10 Plus 5G kamarad Quad ah dhabarka. Kaameeraha ugu weyn ayaa sawiraya ilaa 12 MP, halka muraayadda xagal ballaadhan ay gaadhayso illaa 16 MP. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira Telelinse (12 MP) iyo kamarad waqti duulimaad ah oo lagu aruuriyo macluumaad qoto dheer. Fiidiyowyada ayaa suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo xalka 4K iyo ilaa 60 meegaar halkii seken.
Waxaa jira isbarbardhig toos ah oo laga fiirinayo kuwii ka horreeyay masawirka sawirka:
Meel kale oo ugu sarreeya waa nooca 5G oo ah nooca loo yaqaan ‘Galaxy Note 10 Plus’ ee loogu talagalay kamaradda selfie. Waa kan taleefanka leh 99 dhibcood meesha ugu horeysa. Seddex ka mid ah shanta taleefanno ee casriga ah ee ku jira ‘selfie ranking’ ayaa hadda ka socda Samsung.